Lenovo News: a na, mobiles, mbadamba, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporosis
Lenovo bụ onye na-emepụta China nke na-ere ahịa smartphones na mbadamba na gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ. A makwaara ụlọ ọrụ ahụ maka imepụta kọmpụta kọmpụta, n'etiti ngwaahịa elektrọnik ndị ọzọ. Sdị dịka ZUK na Motorola bụ akụkụ nke Lenovo ugbu a, yabụ ha bụ otu n’ime ihe kachasị mkpa na ahịa gam akporo.
Ejiri Lenovo bara oke uru maka ego, ihe na - eme ha nhọrọ nke ndị nwere mmasị na ndị ahịa. N'ebe a, ị ga - ahụ akụkọ ọhụụ ma ọ bụ nyocha ọhụụ gbasara ekwentị Lenovo yana gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ.
Lenovo Tab P11 egosiri ya na 2K panel, Office suite na gam akporo 10
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 7 .
Onye nrụpụta ama ama ama ama Lenovo ekwupụtala mbadamba nkume ọhụrụ maka ahịa Eshia na aha Tab P11, a…
Lenovo Legion Phone Duel rutere ahịa Europe na 16 GB nke RAM
por Aaron Rivas eme Ọnwa 10 .
Europe anabatala ama ọhụụ, nke na-abụghị onye ọzọ karịa Legion Phone ...
Lenovo Tab P11 Pro, mbadamba ohuru nke nwere 2K ihuenyo na Snapdragon 730G
por Aaron Rivas eme Ọnwa 11 .
Chineselọ ọrụ China nke nwere Motorola, Lenovo, emeela onye ọrụ mbadamba nkume ọhụrụ, nke na-abịa n'okpuru ...
Lenovo Legion Phone Duel bụ onye ọrụ ugbu a ma jiri Snapdragon 865 Plus yana ihuenyo 144 Hz
por Aaron Rivas eme Afọ 1 .
Lenovo bụghị a ika na-mara maka àjà egwuregwu smartphones na ụlọ ọrụ. N'ezie, ihe karịrị ...
Lenovo Z5 Pro GT, ekwentị izizi nke ụwa nwere Snapdragon 855, mechara nweta gam akporo 10
Snapdragon 855 bụ chipset kachasị elu nke 2019 nke ekwuputara na njedebe nke 2018. Nke a…
Lenovo Legion ga-egosipụta ngwa ngwa 90W
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme Afọ 1 .
Izu ole na ole gara aga, anyị na-ekwu maka ntinye nke ụlọ ọrụ Lenovo maka ama egwuregwu, Lenovo Legion….
Lenovo M10 Plus, nnukwu mbadamba ụrọ nke dabere na chipset Mediatek's Helio P22T
Anyị matara usoro ọhụụ ọhụụ nke Huawei, nke nwere nnukwu P40 atọ, yana ...
Lenovo A7 bụ ekwentị ọhụrụ na-ezube ịbanye n'ime ala dị ala na Spreadtrum SoC
Lenovo bụ onye na-emepụta China nke na-anaghị ebuputa smartphones ugboro ugboro. Ya mere, katalọgụ gị dịtụ ...
Lenovo na-arụ ọrụ ugbua na ekwentị 5G na-egwu egwu n'okpuru akara Legion
por Onyeka Onwenu eme Afọ 1 .
Lenovo chọrọ ịbanye n'ụzọ zuru ezu n'ahịa ahịa ama egwuregwu na mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke bụ ...
Nke a bụ mbadamba Lenovo ọhụrụ emere na Snapdragon 450
por Aaron Rivas eme 2 afọ .
Lenovo M10 FHD REL bụ aha nke mbadamba smart smart ọhụrụ nke dị ugbu a maka ...
Lenovo K10 gosipụtara nke ọma ma yie ka edepụtara aha Moto E6 Plus
Lenovo K10 Rịba ama na usoro Lenovo K10 Plus nwere ike inweta onye ọhụụ ọhụụ. Akwụkwọ asambodo nke ...
New Lenovo S5 Pro: 6.3 ″ FHD + panel, SD636 na ndị ọzọ
Lenovo ọkwa 5 mbadamba gam akporo ọhụrụ na atọ ịbụ gam akporo Go Edition
Lenovo ga - ebido ekwentị 5G mbụ nwere Snapdragon 855
Lenovo Tab 4 agaghị enwe gam akporo 8.1 Oreo ruo na njedebe nke afọ
The Lenovo Z5 na-ere na nkeji na ya igba egbe na China
Lenovo A5 na Lenovo K5 Rịba ama: middị ọhụụ ọhụrụ ahụ
Lenovo Z5 na-arụ ọrụ. Mara atụmatụ ya na nkọwa ya!
Nkọwapụta na atụmatụ nke Lenovo K5 na K5 Play
Lenovo S5: Ọdịdị ọhụrụ nke akara ndị China
Mbụ leaked oyiyi nke Moto E5
Lenovo K320t Full ụdịdị Pụtara Ìhè
Moto G4, nyocha na echiche mgbe ọnwa ejirila
Lenovo Phab Plus, phablet nwere ihuenyo 6.8-inch
Lenovo Yoga Tab 3 Pro, mbadamba ihe na-adọrọ mmasị nke nwere pico projector
Rom kachasị mma maka Lenovo K3 Note bụ AOSP Rom sitere na Xancin
Otu esi emelite Lenovo K3 Note na gam akporo 5.1 site na iji Rom esiri dabere na ulo oru Mee 1526
Etu esi etinye TWRP Iweghachite na mgbọrọgwụ Lenovo K3 Cheta
Nyochaa nke Lenovo K3 Rịba ama, Octa Core 64-bit na 2 GB nke RAM naanị 135 Euro
Ndepụta ndepụta nke ọnụ ọnụ Lenovo nke a ga-emelite na Android Lollipop
[APK] Igwefoto kachasị mma maka gam akporo gị a na - akpọ Lenovo Super Camera ma ọ bụ n'efu
Isiokwu ndị gara aga